musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » Waizviziva Here Kuti Kune Aussie Outpost muMunich?
Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • Germany Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Ferris Wheel and Adina Munich Hotel - Mufananidzo © Elisabeth Lang
Anosvika makumi maviri emakore apfuura, dunhu rakashata reNew York rinotakura nyama rakashandurwa kuita nzvimbo ine fashoni, inoyevedza ine vagadziri vemafashoni vakaita saStella McCarthy achivhura boutique yake yekutanga yeNew York uye kuve mugadziri.
Ndichiri kumabvazuva kweLondon, Shoreditch uye kamwe chete mamiriro ekuuraya kwaJack the Ripper, ashanduka kuita guta guru reLondon rinotonhorera.
Nhasi, iyi ihudyu, nzvimbo yemadhorobha ine maresitorendi ane fashoni uye matani emumugwagwa art, mabara, mabhawa, uye macafe akatarisana nemugwagwa.
Uye ikozvino kune itsva East Side yeMunich yekuwana uye kubva kure neguta rekare horo uye guta rekare reMunich.
Kubudirira kweEast Munich kwakatanga mukupera kwamakumi mapfumbamwe pane yaimbova kompani yeGerman hombe kugadzira mbatatisi chirimwa (Pfanni) chiri kuseri kweMunich Ostbahnhof. Pfanni aigadzira machipisi embatatisi ekuGermany, puree yembatatisi, nezvimwewo, uye madumplings embatatisi akawanda, achiatengesa kuEurope yese. Chimiro chakavharwa muna 1996 ndokutamira kunze kweMunich. Nzvimbo yese yakashandurwa kuita Kunstpark Ost (Art Parc East), uye nzvimbo yefekitori yakapararira yakava nzvimbo yekupedzisira yepati usiku.
Nekushanduka kwepasi uye kukura kukuru, Munich Eastside (inonzi Werksviertel) ndiyo nzvimbo yekuve ikozvino (kuona) uye sarudzo yakanaka yevanodya uye. craft beer aficionados, ine ma pubs, macafe uye akasiyana siyana akasiyana eresitorendi nemahotera matsva.
Chimwe chezvinhu zvinonyanya kukwezva ivhiri reFerris, iro rinotora maminetsi makumi matatu nemashanu kuchovha uye rine makamuri makumi maviri nemanomwe akagadzikana. Pazuva rakanaka, unogona kuona maAlps kana kunakidzwa nekuvira kwezuva kwakanaka, uine grandioso maonero eMunch achitambanudzira pasi (35 metres) uchiona zvitima zvine mutsetse wakananga kuMunich Airport (27 maminetsi).
Munich Town Hall - Mufananidzo © Elisabeth Lang
Nekudaro, kana iwe uchitsvaga chero signpost kuOstbahnhof, Munich East Chitima Chiteshi, uye mafambiro kune Ferris vhiri, uri kutarisa pasina. Hakuna! Icho chinoramba chiri chakavanzika nei guta reMunich richida kuchengetedza imwe yezvakanakisa zveMunich zvinokwezva seguta rakachengetedzwa zvakanyanya chakavanzika.
Asi ndipo pano pakawedzerwa tsvarakadenga yeMunich ichangoburwa nekuvhurwa kwehotera refu muMunich mwedzi wapfuura, yakavakwa pane yaimbova silo yembatatisi. Ndiyo hotera yeMunich yekutanga yeAussie uye inovhura maziso.
Iyo itsva Adina Hotel Munich iri pa9th kusvika 25th floor uye inopa inoshamisa maonero pamusoro peMunich. Pakuenda kunotambira, lift inopa maonero eiyo yakadhindwa yeSydney Opera imba. Iwe unogona kunzwa kubata kweAustralia. Maonero acho mashiripiti, uye anonakidza kuona zvitima zvitsvuku zvikaramba zvichibuda muOstbahnhof Station uye kuona Frauenkirche, BMW towers, uye shongwe yeterevhizheni kumashure.
Makwai ari padenga - Mufananidzo © Elisabeth Lang
Vari muresitorendi, vaenzi vanogona kutarira pasi kune eclectic nharaunda iri pedyo uye votarisa kuchivakwa chichangobva kuvakwa pazasi (7 nyaya) apo munhu anogona kuona chaiyo yedhorobha ALM (agricultural land management) padenga remba. Hapana dziva rokutuhwina reunyanzvi, asi makwai chaiwoiwo anofura pauswa hwakasvibirira padenga remba achifara, nepo huku dzakabatikana dzichimhanya-mhanya uye dzinogona kudzokera zvakakotsekana kuchikwere chadzo chehuku.
Chokwadi iyi inzvimbo inonakidza eclectic inofanirwa kuongororwa.